Vaovao - Curcumin naseho mba hanatsarana ny mari-pana amin'ny serum
Curcumin naseho hanatsarana ny mari-pamantarana mamaivay amin'ny serum
Ny valin'ny fanadihadiana vaovao navoaka tao amin'ny diary Biomed Central BMC dia naneho fa ny fitrandrahana kunmerika dia mandaitra toy ny paracetamol amin'ny fampihenana ny fanaintainana sy ireo soritr'aretin'ny osteoarthritis (OA) amin'ny lohalika. Ny fandinihana dia naneho fa ny fitambarana bioavailable dia nahomby kokoa tamin'ny fampihenana ny fivontosana.
Ny osteoarthritis dia aretina mihasimba amin'ny tonon-taolana izay miavaka amin'ny famotehana ny tazomoka, ny firakotra miaraka, ny ligament ary ny taolana mifototra. Ny fisehoan'ny osteoarthritis mahazatra dia ny hamafiny sy ny fanaintainana.
Notarihin'i Shuba Singhal, PhD, ity fandalinana klinika tsy voafehy ity dia natao tao amin'ny Departemantan'ny Orthopedics ao amin'ny Hopitaly Lok Nayak Jai Prakash / College Maulana Azad Medical, New Delhi. Ho an'ny fandinihana, ny marary 193 voan'ny osteoarthritis amin'ny lohalika dia navotsotra mba handray ny fitrandrahana turmerika (BCM-95) ho kapsula 500 mg indroa isan'andro, na ny takelaka 650 mg paracetamol intelo isan'andro mandritra ny enim-bolana.
Ny soritr'aretin'ny lohalika amin'ny fanaintainana, ny hamafisan'ny fiombonambe ary ny fihenan'ny fiasa ara-batana dia novaina tamin'ny alàlan'ny Western Ontario sy McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC). Taorian'ny fitsaboana enina herinandro dia naneho fanatsarana lehibe ny isa WOMAC manerana ny masontsivana rehetra azo ampitahaina amin'ny vondrona paracetamol, miaraka amin'ny 18% an'ny vondrona BCM-95 mitantara fanatsarana 50% ary 3% ny lohahevitra nanamarika ny fihatsarana 70%.
Ireo valiny ireo dia hita taratra tsara tao amin'ireo marika serum inflammatoire an'ny vondrona BCM-95: ny tahan'ny CRP dia nihena 37,21%, ary ny haavon'ny TNF-α dia notapahina 74,81%, nanondro ny BCM-95 vita tsara kokoa noho ny paracetamol.
Ny fandinihana dia fanarahana ny fanadihadiana nataon'ny Arjuna izay natao herintaona lasa izay izay nampiseho fifandraisana tsara teo amin'ny famolavolana ny curcumin voalohany sy ny fikolokoloana osteoarthritic.
"Ny tanjon'ny fandinihana amin'izao fotoana izao dia ny hampiorina ireo fandalinana taloha mba hanomezana fanazavana mazava tsara sy miavaka amin'ny alàlan'ny fampidirana marika marobe sy fomba fikajiana isa tsara kokoa," hoy i Benny Antony, talen'ny fitantanana mpiara-miasa amin'i Arjuna. "Ny vokatra manohitra ny aretin-tsaina an'ny BCM-95 amin'ny osteoarthritis dia vokatry ny fahaizany manova ny marika anti-inflammatoire TNF sy CRP."
Ny lohalika OA no antony voalohany mahatonga ny kilema sy ny fanaintainana eo amin'ny olon-dehibe sy ny antitra. Tombanana ho 10 ka hatramin'ny 15% ny olon-dehibe rehetra mihoatra ny 60 taona no manana ny marim-pahaizana OA, miaraka amin'ny prevalence avo kokoa eo amin'ny vehivavy noho ny lehilahy.
"Ity fandinihana ity dia manamafy ny voka-dratsin'ny anti-arthritic an'ny BCM-95 ary manome fanantenana vaovao ho an'ny olona an-tapitrisany hanatsara ny kalitaon'ny fiainany", hoy i Nipen Lavingia, mpanolotsaina fanavaozana marika ho an'ny Arjuna Natural monina any Dallas, TX.
"Mianatra bebe kokoa momba ny mekanika ao ambadiky ny fiasan'ny curcumin miady amin'ny inflammatoire izay inoantsika fa vokatry ny fahafahany manakana ireo famantarana pro-inflammatoire, toy ny prostaglandins, leukotrienes, ary cyclooxygenase-2. Ho fanampin'izany, ny curcumin dia naseho mba hanafoanana ireo cytokine pro-inflammatoire sy mpanelanelana amin'ny famotsorana azy ireo, toy ny tumor nekrosis factor-α (TNF-α), IL-1, IL-8, ary ny synthase azota azota, "hoy i Antony.
Ny fampifangaroana curcuminoids tsy manam-paharoa an'ny BCM-95 sy ireo singa misy menaka manitra tena ilaina amin'ny turmerone dia mandresy ny sakana biolojika mampiavaka ny curcumin noho ny toetrany avo lenta lipofilika.